Archive du 20190704
Marc Ravalomanana “Voahosihosy ny fahamarinana…”
Nentina am-bavaka mba hijoro marina hiaro sy hihevitra ary hijery izay hahasoa ny vahoaka Malagasy amin’ny tolo-kevitra sy fampandaniana ny lalàna hataony ireo depiote TIM 16 vao lany.
Depiote vaovao Hahay hitsitsy ve sa hidongy tombotsoa indray
Nivoaka iny ny vokatra ofisialin` ny fifidianana solombavambahoaka ka mazava be ny maro an` isa ho an` ny Fitondram-panjakana entin` ny Filoha Andry Rajoelina.
Fiatrehana ny fifidianana ben`ny tanàna Maro ny zavatra mila alamina
Miisa 1695 ireo kaominina maneran ny nosy, noho izany ben`ny tanàna 1695 no hofidiana miampy mpanolotsaina kaominaly izay samy manana ny isany arakaraka ny isan`ny mponina ao amin`ny kaominina iray.
Fiainam-pirenena Tsy taitra amin`ny politika intsony ny olona
Tsy nampiova ny vokatra navoakan`ny CENI ireo fitoriana nataon`ireo kandidà solombavambahoaka maro teo anivon`ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC).
Ampahavalon-dalan’ny CAN EGYPTE 2019 Ny RDC no hihaona amin’ny Barea Malagasy
Efa fantatra avokoa ireo ekipa 16 hifanandrina amin’ny ampahavalon-dalan’ny fifaninanana CAN 2019 andiany faha-32 tontosaina any Egypte ankehitriny.
Top 5 de la rédaction d’Africa topsports Voasokajy ho anisan’ireo mpilalao mendrika i Carolus
Namoaka ny anaran’ireo mpilalao 5 mendrika indrindra tamin’ny dingana voalohan’ny CAN 2019 ny gazety ara-panatanjahantena malaza any Togo
Edito Fisandratana hafa no tonga
Fisandratan’i Madagasikara na hoe « emergeance de Madagascar » no nampanantenain’ny filoham-pirenena sy ireo mpiaradia aminy efa ho herintaona izao.
Rosia “Sous-marin” iray nirehitra
Miisa 14 ireo namoy ny ainy vokatry ny loza nahazo ny “sous-marin” Rosianina iray tany afovoan’ny ranomasina atlantika.
Lybie Mamatsy fitaovam-piadiana azy i Torkia
Nitsoa-ponenana avokoa ireo mponina nandritra ny fanafihana natao tao Tajoura Lybie. 44 no namoy ny ainy ka an-jatony ireo naratra.
Fiarovana ny tontolo Nisy fifaninanana fanangonana fako plastika
Nivoaka ankehitriny ny ezaka nataon`ireo mpirotsaka an-tsehatra nanadio ranomasina tamin`ny alalan`ny fifaninanana.
CNaPS sy ny Sendikan’ny mpitatitra Mifanome tanana ho an’ny asa mendrika
Voatsangana ny komity iraisan’ny CNaPS sy ny sendikan’ny mpitatitra hitondra ny fanentanana manerana ny Nosy mba hisian’ny fiahiana ara-tsosialy ho azy ireo.
Mitoka-monina i Midongy Atsimo 200 Ariary ny kilaon’ny vary, 250 Ar ny tsaramaso
Rariny raha ambany ny vidim-bokatra any amin’ny distrika Midongy Atsimo faritra Atsimo Atsinanana satria tena mitoka-monina io faritra io araka ny nambaran’ny solombavambahoaka vaovao tsy miankina,
Anosizato Atsinanana Efitrano 4 may kila noho ny ankoson’aratra
Nitrangana hain-trano goavana tetsy Anosizato Atsinanana, ampitan’ny fahitalavitra Record omaly tokony ho tamin’ny 11 ora atoandro.
TRAFIKANA ZAVA-MAHADOMELINA Rongony 60kg mahery sarona teo Anosizato
Tra-tehaka teo Anosizato ny rongony 62kg. Efa voatsinjara roapolo isa izany ary mitovy lanja avokoa izay 3 kilao sy 100g isanisany.